नेपालीको ढुकुटीमा ह्याकरका आँखा, यस्ताे छ नालीबेली
१३ भदौमा नेपाली बैंकका एटीएम बुथलाई निशाना बनाउँदै चिनियाँ ह्याकरहरूको एक समूह काठमाडौं ओर्लियो । चीनमै योजना बनाएर नेपाल आएको ह्याकरहरूको उक्त समूहले भोलिपल्ट बिदाको दिन पारेर पैसा चोरेर फर्किने योजना मुताबिक नेपाली बैंकका एटीएम बुथहरूमा हमला गर्‍यो तर बैंकका कर्मचारीहरूको सजगता एवं प्रहरी सक्रियता कारण २४ घण्टाभित्रै काठमाडौंका एटीएमहरू रित्याएर फर्किने उनीहरूको योजना सफल हुन सकेन् ।
३ कात्तिक ०७४ मा भर्चुअल चोरहरूले एनआईसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरे । तिहारको बिदाको समय पारेर ह्याकरहरूले झन्डै ४१ करोड रुपैयाँ चोरी गरेर विभिन्न ६ देशमा रहेका खातामा ट्रान्सफर गर्ने प्रयास गरे । विभिन्न देशमा पुगेको र पुग्ने क्रममा रहेको उक्त ३६ करोड रुपैयाँ एनआईसी एसियाले फिर्ता ल्याइसकेको छ । जापान पुगेको ५ करोड रुपैयाँ भने फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले दिएका छन् ।
अझ अचम्म पार्ने तथ्य त के छ भने धेरैजसो विदेशी पर्यटक भेषमा नेपाल छिरेर एटीएम ह्याकिङमार्फत नेपालीहरूको पैसा चोर्ने गरेका छन् । गहन अपराधको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले ०७० यता मात्रै एटीएमबाट अनधिकृत रूपमा पैसा निकाल्ने १८ जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । ‘विगत ६ वर्षको अवधिमा ११ वटा अप्रेसनमा अनधिकृत रुपमा एटीएमबाटै पैसा चोर्ने १८ जना विदेशीलाई पक्राउ गरेका छौं,’ ब्युरोका प्रवक्ता दीपक रेग्मीले भने, ‘उनीहरू एटीएमबाट अनधिकृत रुपमा पैसा चोर्ने लक्ष्य लिएरै नेपाल आएका देखिन्छन् ।’ यही अवधिमा एटीएम फ्रडमा संलग्न ६ जना नेपाली पनि पक्राउ परे । उनीहरूले २ करोड ७७ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको हानी गरेको ब्यूरोको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
अनधिकृत रूपमा एटीएम ह्याक गरेर पैसा चोर्ने रोमानियन, टर्किस, बुल्गेरियन, माल्दोभियन, भारतीय आदिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा डाटा ह्याक गर्ने र पैसा चोर्ने ती समूह फरक–फरक पाइएको छ । भर्चुअल चोरहरूले केही त्यस्ता व्यक्तिलाई हायर गर्छन्, जो उनीहरूले छनोट गरेको टार्गेटमा पुगेर उपलब्ध गराएको पिन कोड प्रयोग गरी पैसा चोर्छन् । अनुसन्धानमा सक्रिय एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार पैसा चोरेपछि उनीहरूले त्यसलाई निश्चित प्रतिशतका आधारमा आपसमा भागबन्डा गर्छन् ।
युटिएस युनिभर्सिटी सिड्नीबाट रिस्क म्यानेजमेन्टमा विद्यावारिधि गरेका डा. प्रमोद पराजुली नेपालमा आइटी क्षेत्रको इन्फ्रास्ट्रक्चर नै कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘आईटियुलगायतका संस्थाहरूले निकालेको सुचकहरूमा नेपालको साइबर सेक्युरिटीमा निकै कमजोर छ,’ डा. पराजुली भन्छन्, ‘यसको अर्थ हामीसँग बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर भएका बेला सेक्युरिटी कम छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा आधारभूत संरचना नै कमजोर हुने भएकाले ह्याकरहरूको पहिलो निशाना यस्तै देशहरू हुन्छन् ।’ नेपालका अन्य संस्थाहरूको तुलनामा बैंकिङ सेक्युरिटी बलियो भए पनि अझै अपग्रेड गर्नुपर्ने घटनाक्रमहरूले देखाएको उनले बताए ।
एटीएममा आधारित मालवेयर एट्याक थप एड्भान्स तरिकाले अघि बढिरहेको छ । एटीएम मेसिनबाट नगद निकाल्न यसको प्रयोग गरिन्छ । पहिलो पटक एटीएम स्किमर मालवेयरको डिजाइन करिब १० वर्षपहिले गरिएको थियो । यस प्रकारको मालवेयरलाई भर्चुअल स्किमर तथा क्यास डिस्पेन्सर गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । स्किमरले कार्डको डाटा, कारोबारको विस्तृत विवरण एवं पिन प्रयोग गरी डाटा चोरी गरिन्छ भने डिस्पेन्सरमार्फत एटीएमबाट सिधै नगद निकाल्न प्रयोग गरिन्छ । साप्ताहिक साभार ।